Xaflad aroos oo foowdo isu bedeshey kaddib markii ay soo weerartay XAASKA ninkii caruuska ahaa! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Xaflad aroos oo foowdo isu bedeshey kaddib markii ay soo weerartay XAASKA...
Xaflad aroos oo foowdo isu bedeshey kaddib markii ay soo weerartay XAASKA ninkii caruuska ahaa!
(Kiambu) 27 Abriil 2019 – Munaasabad aroos oo maanta ka dhacaysey dalka Kenya ayaa mar qura foowdo isu rogtey, kaddib markii ay goobta soo gaartey naag uu qarinayay ninkii guursanayey.
Caruuska ayaa waloow ay naagtii hore kala deggan yihiin, weli sharci ahaan ku mehersan, maadaama aanu kiiskoodu weli kasoo dhamaanin dhanka maxkamadda madaniga ah.
Waxaa la rumaysan yahay inay caruusaddu ay ilaalo kiraysatey kaddib markii ay ka war heshay inay goobta weerar la maaggan tahay xaaskii hore.
Weriyaha hilinka Citizen TV ee degaanka Kiambu, Charles Gikunga, ayaa sheegay in meesha dhaawacyo yar yar la isku gaarsiiyay, waloow saxaafadda inta badan dibedda lagu horay.
Booliiska oo goobta soo gaarey ayaa kala diidey dadkii is haystey, balse taasi ma dhicin kahor intaan xafladdii arooska oo ka dhacaysey kaniisadda St. James ACK Kiambu aysan isu bedelin goob foowdo oo uu feer ka socdo.
Previous articleHoggaamiyaha waa inay meel fog wax uga HIRAAN (Fadlan akhri)
Next articleGOOGOOSKA: Juventus vs Inter Milan 1-1